अमेरिका र दक्षिण कोरियाको 'वार प्लान' उत्तर कोरियाले ह्याक गर्‍यो !
सोल (रासस/एएफपी) / उत्तर कोरियाको कम्प्युटर ह्याकरले दक्षिण कोरियाका कम्प्युटरहरु ह्याक गरी महत्वपूर्ण सामाग्रीहरु चोरेको आरोप लगाइएको छ ।
ती सामाग्रीहरुमा उत्तरदुई कोरियाको युद्धका समयमा भएका सैनिक एवम् सरकारी रणनीतिहरुका साथै युद्धसम्बन्धी संवेदनशील दस्ताबेजहरु पनि रहेको बताइएको छ ।
कोरिया युद्धका समयमा दक्षिण कोरियाली सेनाले सैनिक अप्रेसनका समयमा बनाएका योजनाहरु सम्मिलित दस्ताबेजहरु पनि त्यसमा रहेका दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
उत्तर कोरियाको ह्याकरले दक्षिण कोरियाली सेनाको नेटवर्कमा आक्रमण गरेको र त्यसबाट २३५ गिगा बाइट बराबरका अति सम्वेदनशील तथ्यांकहरु चोरेको जनाएको छ ।
दक्षिण कोरियाको सत्ताधारी डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसद रुचिल हीले कम्प्युटर ह्याक गरिएको सम्बन्धी सो जानकारी दिए ।
उनले गत सेप्टेम्बर महिनामा उत्तर कोरियाली कम्प्युटर ह्याकरले दक्षिण कोरियाली सेनाको कम्प्युटरमै आक्रमण गरेको जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
उत्तर कोरियाको भिन्न सैन्य परेड जहाँ देखिएन कुनै पनि मिसाइल र आणविक हतियार !
काठमाडौं । उत्तर कोरियाले ७०औँ स्थापना दिवसको अवसरमा राजधानी प्योंगयांगमा विशाल सैन्य प्रदर्शन गरेको छ । एजेन्सीहरुका अनुसार पहिले पहिले गरिनै सैन्य परेडभन्दा यसपटकको बिल्कुलै भिन्न रहेको थियो । आइतबार परेको
दक्षिण उत्तर कोरिया शिखर बैठक असोज २ मा
सिओल । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे इन र उत्तर कोरियाली नेता कीम जोङ–उनबीचको शिखर बैठक उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङमा आगामी असोज २ मा गर्नेगरी मिति तय भएको मूनका विशेषदूतले
टोकियो । उत्तर कोरियाबाट अझै पनि गम्भीर खतरा देखिएको टिप्पणी जापानले गरेको छ । जापानी रक्षामन्त्रालयको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो वार्षिक बैठकमा जापानी अधिकारीले उत्तर कोरियाबाट ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका